Gabdho Walaalo Ah Oo U Geeriyooday Gudiin Lagu Sameeyay + Deegaanka Ay Ku Noolaayeen Labada Gabdhood Iyo Magacaantooda Oo La Shaaciyay
Friday, 14 September 2018 11:29
14/09/2018(BNN) Wararka kasoo baxay deegaannada maamulka Puntland ayaa sheegaya in Laba gabdhood oo walaalo ah ay ku geeriyoodeen halkaasi, kadib markii xubnaha taranka lagaga sameeyay gudniinka fircooniga ah.
Labadan gabdhood ee walaalaha ah ayaa lagu kala magacaabi jiray Khadiija Cabdi Warsame oo 11 jir ahayd iyo walaasheed Aasiya oo 10 sano jir ahayd, sida ay sheegtay Xaawa Aadan Maxamed oo u dhaqaaqda ka hortagga gudniinka fircooniga ah.
Geerida labadan gabdhood ee walaalaha ah ayaa dhacday 11-kii September kadib markii lagu guday meel la yidhaahdo Arawada oo maamulka Puntland ka tiran.
Xaawa oo maamusha xarun waxbarasho oo ku taalla gaalkacayo ayaa sheegtay in labada hablood ay dhiigbaxayeen saacado badan markii la guday, waxaana ay geeriyoodeen intii hooyadood ay cisbitaalka u sii wadday.
“Nasiibdarro ma aysan gaarin isbitaalka, waxaana ay dhinteen intii ay waddada ku jireen” ayey tidhi Xaawa oo ku baaqday in dowladda ay soo saarto sharci mamnuucaya gudniinka.
Falalka noocan ah ayaa kusoo noqnoqda Gobollada Soomaaliya waxaana sidan oo kale deegaannada Puntland laba bilood ka hor ugu geeriyootay gabadh yar oo lagu sameeyay gudniinka Fircooniga ah, taasi oo ku geeriyootay cisbitaal ay dhakhaatiirtu kula tacaalayeen xaaladdeeda.
More in this category: « DAAWO: Caruurta Agaamaha Ah Ee Ku Nool Dalka Afganistaan Oo Soo Bandhigay Waxyaabo Soo Jiitay Indhaha Bulshada Iyo Muqaal Yaableh Daawo Waxa Dhacay Ciidamada Dalka Turkiga Oo Ku Sii Qulqulaya Magaalada Idlib Ee Dalka Suuriya Xili Ay Ciidamada Suuriyana Isku Diyaarinayaan Duulaan Xoogan Oo Ay Ku Soo Qaadayaan Magaaladaasi »